Monday, June 25th, 2018 - 18:58:49
Wenger oo Safi doona Koscielny Kulanka Tottenham, aaway Bellerin?
0 Friday November 06, 2015 - 14:00:02
Arsenal ayaa waxaa ay soo safi doontaa Laacibka Difaaca dhexe ka ciyaara ee Koscielny kulanka Tottenham, keddib Fashilkii ka dhacay booska uu banneeyay da'yarka Bellerin, ciyaartii Bayern Munich ee Champions League.
Sterling: Tayo ayaan ka helay Man City si ka duwan Liverpool
0 Thursday November 05, 2015 - 18:36:46
Laacibka Dalka England u dhashay ayaa waxaa uu ka hadlay markii u horreysay Faraqa u dhexeeya Kooxdiisii hore ee Reds iyo Tan hadda uu ka tirsanyahay ee Man City.
Benitez: Waxaan rajeynayaa in Ronaldo uu sidiisii kusoo Laabto Kulanka Sevilla
0 Thursday November 05, 2015 - 18:36:09
Tababare Rafa Benitez ayaa waxaa uu cadaadis ku saarayaa Laacibka Kooxda Real Madrid ee Cristiano Ronaldo in uu soo ceshado Bandhiggiisii Kulanka Sevilla ee Axadda.
PSG oo ku kalsoon in ay Ronaldo ka bixiso £100m
0 Thursday November 05, 2015 - 13:23:40
Paris Saint-Germain ayaa waxaa ay dooneysaa in ay Kooxda Ingiriiska ah ee Man Utd kula dagaallanto Saxiixa Laacibka Booska weerarka ka ciyaara ee Ronaldo.
Diiradda Juventus: Ma waxaa dhammaaday Waqtigii Allegri?
0 Thursday November 05, 2015 - 12:10:44
Haddii kooxda Juventus 2015/16 ay ku fashilanto mar kale guul ay ka gaarto Serie A xagaagan waxaa su'aali saarantahay Shaqada Macallin Allegri.
Verratti oo seegi doona Kulamada Xulka Talyaaniga
0 Thursday November 05, 2015 - 12:10:35
Italy iyo Paris Saint-Germain booskooda dhexe Marco Verratti ayaa lumin doona kulamada uu xulkiisu ciyaari doono.
Bayern oo sida daadka oo kale ugu fatahday Arsenal +Sawirro
0 Thursday November 05, 2015 - 01:16:21
( Kubadbile)- Kooxda Bayer Munich ayaa garoonkeeda Aiensa Arena ku marti gelisay kooxda Arsenal kulanki afaraad e koobka horyaalda Yurub Group E ee koobka horyaalada Yurub waxayna kaga adkaatay 5-1.
Lauren Blanc oo diiday inuu saxaafadda u sheego xantii Ronaldo dhegta ugu reebay
0 Wednesday November 04, 2015 - 18:38:47
(Kubadbile) Warbaahinta ayaa isku dayday inay wax ka ogaato xan uu dhegta uGu sheegay C.Ronaldo tababaraha PSG Lauren Blanc markii uu soo idlaaday kulankii dhexmaray kooxaha Real Madrid iyo PSG.
Paul Scholes oo dhaleeceeyay jiliinka badan ee Young
0 Wednesday November 04, 2015 - 14:45:13
(Kubadbile) Laacibkii hore ee Manchester United Paul Scholes ayaan la dhacsaneyn istuut tuurka iyo isyeelyeelka wiilka garabka uga dheela Manchester United Ashley Young.
Xaqiiq: Arsene Wenger oo iska diiday inuu qaato Guardiola oo cayaaryahan Arsenal jecel ahaa
0 Wednesday November 04, 2015 - 14:41:46
(Kubadbile) Arsene Wenger layliyaha kooxda Arsenal ayaa sheegtay in Pep Guardiola uu 14 sano kahor doonayay inuu kusoo biro Arsenal kana hoos shaqeeyo Arsene isaga oo ah cayaartoy Gunners metela.
Aguero oo bartiisa bulsheed ku amaanay saaxiibadiisa kooxda
0 Wednesday November 04, 2015 - 14:39:09
(Kubadbile) Manchester City weeraryahankeeda Sergio Aguero ayaa amaan ugu qubeeyay cayaartoyda ay koox wadaaga yihiin kaddib guushii ay ka gaareen kooxda Sevilla kulankii xalay.
Van Gaal muxuu ka yiri bedelkii uu ku sameeyay Martial???
0 Wednesday November 04, 2015 - 11:40:16
(Kubadbile) Manchester United maareeyaheeda Louis van Gaal ayaa difaacay bedelkii uu ku sameeyay wiilka reer Faransa Anthony Martial kulankii xalay ay ka badiyeen CSK Moscow.
Akhriso: Falanqeynta Kulanka Bayern Munich Iyo Arsenal Ee Caawa
0 Wednesday November 04, 2015 - 10:05:49
(Kubadbile)-Kooxda Bayern München ayaa waxa ay caawa fileysaa in ay ka aargudan doonto kooxda Arsenal maadaama kulankii hore guuldaro la soo gaarsiiyay kooxdaan.
Natiijooyinka Dhammaan Kumalamdii Champions league, Sidee Guruubyada loo kala Hoggaaminayaa?
0 Wednesday November 04, 2015 - 09:56:18
Ciyaaro ka tirsan Tar-tanka Champions league ayaa la ciyaaray Xalay iyadoo garoomada kala duwan ee qaaradda Yudub ay ka dhaceen Kulamo muhiim ah.
Man United oo guul ay ku rafaaday ka gaartay kooxda CSKA Moscow
0 Wednesday November 04, 2015 - 01:24:13
(Kubadbile)- kooxda Manchester United ayta guul ay dhib badan ka martay ka gaartay koxda Cska Moscow ee dalka Ruushaka oo kulan katirsan Chasmions League Group B ku marti Gelisay garoonka Old Traford.
Cristiano Ronaldo oo xaqiijiyay inuu dhaawac qabo, Tolow ma seegayaa kulanka caawa???
0 Tuesday November 03, 2015 - 20:39:04
(Kubadbile) Weeraryahanka kooxda Real Madrid Cristiano Ronaldo ayaa kahor kulanka caawa PSG ay la dheelayaan carabka ku dhuftay inuu dhaawac iyo xanuun qabo.
Benitez oo aaminsan in PSG ay kamid tahay kooxaha Yurub ugu fiican
0 Tuesday November 03, 2015 - 20:14:15
(Kubadbile) Maareeyaha kooxda Real Madrid Rafael Benitez ayaa ka hor kulanka adag ee caawa ay garoonkooda kusoo dhaweynayaan kooxda PSG ku tilmaamay naadiga Ligue 1 kasoo baqoolay inay kubbadda Yurub kooxaha ugu wanaagsanyihiin kamid tahay.
DI Maria oo soo dhaweyn ka filaya Bernabue
0 Tuesday November 03, 2015 - 18:02:55
(Kubadbile) Wiilkii hore ee kooxda Real Madrid Angel Di Maria ayaa rajo ka qaba in soo dhaweyn wacan uu kala kulmo gegeda Bernabue marka ay caawa foodda isdaraan kooxaha PSG iyo Real Madrid.
Silva ayaa seegi doona kulanka Champions League ay la dheelayaan Sevilla
0 Tuesday November 03, 2015 - 15:47:33
(Kubadbile) Kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa isku diyaarineysa inay caawa wajahdo kooxda Sevilla tartanka kooxaha Yurub la'aanta wiilkeeda qadka dhexe Silva.
Philipp Lahm oo sii saadaaliyay qaab cayaareedka Arsenal
0 Tuesday November 03, 2015 - 14:31:52
(Kubadbile) Kulan adag oo ka tirsan tartanka kooxaha Yurub ee Champions League ayaa dhexmari doona kooxaha Arsenal iyo Bayern Munich, iyadoo labada dhanba ay maanka ku hayaan inay guulo gaaraan.
« Prev1 ... 29303132333435 ... 41Next »